‘लुट’सँग हारेपछि विस्तापित भएका अर्जुन ! «
Published :2June, 2020 10:37 pm
फिल्म क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो, अर्जुन कार्की । ‘जंगली मान्छे, दिदि भाई, हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ, वरदान, भगवान सबैको’ लगायतका फिल्ममा काम गरेका अर्जुन सफल नायकमा पर्छन् । कुनै समय एक्सन स्टारका रुपमा उनको नाम दर्ज थियो । तर, अहिले उनै अर्जुन कार्मी फिल्म क्षेत्रबाट टाढा छन् ।
किन फिल्म क्षेत्रबाट टाढा छन् त अर्जुन ? यसको उत्तर सजिलो छ । फिल्म क्षेत्रमा आएको नयाँ ट्रेण्डका कारण नै उनी फिल्म क्षेत्रबाट टाढा भएका हुन् । उनी पनि यो कुरालाई स्विकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ ट्रेण्डमा भिज्न सकिन्छ जस्तो लागेन । त्यसैले आफैँ पछि हटे ।’
उनी फिल्म क्षेत्रसँग टाढा हुनुको अर्को कारण पनि छ । उनी अभिनित फिल्म ‘बजार’ र ट्रेण्ड सेटर फिल्म लुट एकसाथ रिलिज भएको थियो । लुट फिल्मको अगाडि बजार फिल्मले पानी भन्न सकेन । अर्जुन भन्छन्, ‘मैले आश गरेको फिल्म थियो बजार । उक्त फिल्म पनि असफल भएपछि नयाँ विकल्प खोज्न लागे ।’
फिल्मको असफलताले उनलाई सगरमाथा चड्ने जोश दियो । अर्जुनले सगरमाथाको चुचुरो चुमेका छन् । त्यहाँ पुगेर शिरासन पनि गरेका छन् । उनीसँग सगरमाथा चड्दाको धेरै अनुभव छ ।
अहिले भने अर्जुन कार्की होटल व्यावसायमा लागेका छन् । उनले दमक र इटहरीमा होटल संचानल गरेका छन् । होटल व्यावसायबाट पनि राम्रो आम्दानी भइरहेको उनी बताउछन् ।
तपाईलाई थाहा छ वा छैन्, अर्जन कार्की अहिलेका चर्चित कलाकार विपिन कार्कीका सहेदार दाई हुन् । भाईले फिल्म क्षेत्रमा आफ्नो गतिलो उपस्थिती जनाइरहेको समयमा अर्जुनलाई पनि कमब्याक गर्ने मन छ । उनी भन्छन्, ‘कोही राम्रो विषयबस्तु र राम्रो स्कृप्ट लिएर आउनु हुन्छ भने पक्कै कमब्याक गर्नेछु ।’